Hetsika Biru Terong : Fampiasàna ny herin’ny lahatsary hitondra fiovàna sôsialy ao Indônezia · Global Voices teny Malagasy
Loko mavokely 'fitafin'ireo vehivavy mahery' no aingampanahy nakàna ny anarana
Voadika ny 01 Mey 2021 5:50 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Nederlands, Português, Español, Ελληνικά, English
Pikantsary avy amin'ny tranonkala Biru Terong
Ity lahatsoratr'i Egbert Wits ity dia avy ao amin'ny tambajotra Video4Change, fikambanana iray ivondronan'ireo fikambanana manetsika ny fampiasàna ny lahatsary ho fiarovana ny zon'olombelona, ny rariny ara-tsôsialy sy ny fiovàn'ny tontolo iainana. Nokiraina sy naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ity tantara ity ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty nifanaovana tamin'ny EngageMedia.
Nandritra ny faran'ny tolakandro iray, nanorana be, tamin'ny 2020 tao Yogyakarta, Indonezia, no nitafàko tamin'i Vivian Idris, mpanorina ny Hetsika Biru Terong izay vao haingana no niditra ho isan'ny mpikambana ao anatin'ny Tambajotra Video4Change.
Sady manaja ny elanelana ihany, ary miaraka amina akondro natono tena matsiro sy dite sakamalaho mahamay eran'ny zinga manasaraka anay, nohazavain'i Idris tamiko izay rehetra momba ny Biru Terong. Kanefa, tsy mbola voapetrako akory ny fanontaniako, izy efa nanomboka nampiseho ny halalin'ny firehetampony amin'ny hevitra hanjohy ny tambajotra Video4Change.
Tena hatramin'ny nidirako nanatevin-daharana ny Impact Toolkit Co-Creation Lab tao Jakarta tany amin'ny taona 2019 tany, tena nahatsapa aho hoe mifandray betsaka amin'ny Video for Change ny asa ataonay ao amin'ny Biru Terong. Avy amin'ny fahitako tamin'izany fotoana izany avy eo— hoe misy tambajotrana fikambanana miombona fotopisainana, samy mampiasa daholo ny tanjaky ny lahatsary mba hiatrehana ireo olana sôsialy ary hamoronana fiovàna—ka tonga aty amin'ny Biru Terong amin'izao fotoana izao hoe isan'ny ao anatin'ilay tambajotra, sy ny hoe izaho mihaona amin'ireny olona hafa rehetra mahafinaritra ireny, dia tena nampientanentana sy nanome risipo tokoa.
Egbert Wits (EW): Inona izao no lahatsary noketrehan'ny Biru Terong heverinao fa tokony hanaovana ady sisika hojeren'ny Video for Change?
Vivian Idris (VI): Ny farany indrindra, mba hanomezana velontena ho an'ireo ankohonana manerana an'i Indonezia, dia niarahan'ny ekipanay niasa ny PEKKA, fikambanana iray miasa miaraka amin'ireo tokantrano tantanina vehivavy. Nampiasainay ny lahatsary mba handraketana ny tolona ataon'ireo vehivavy hahitàna izay hohanina sy hikarohana fomba feno fahaizamamorona mba hanohanana ara-bola ny ankohonan-dry zareo. Ny nandefasanay ireo sary azonay dia nahafahanay nampiseho tamin'ireo vehivavy tao amin'ny faritra iray ao Indonezia ny fomba fanaon'ireo vehivavy any amin'ny faritra hafa, no sady niresahana momba izay azo ianarana avy amin'ny fomba fanaon'ny vehivavy hafa.
EW: Ahoana no fampiharanao ny Lahatsary ho an'ny Fanovàna eo amin'ny asanao?
VI: Mba hitahirizana ny tena zavamisy ara-tsosialy sy ara-toekarena any anatin'ireo vondrona atao ankilabao ao anaty fiarahamonina dia ampiasainay ny lahatsary, ary ampiasainay ireny sary ireny mba hanetsehana ny fifanakalozankevitra sy ny fizàrana asa. Amin'ny fampandraisana anjara ireo vehivavy ao anatin'ny dingan'ny famokarana; lasa tonga saina kokoa ry zareo momba ny toedraharaha misy azy, ary lasa misokatra kokoa sy sahisahy manao dingana sy mitaky fomba fikarakarana tsara kokoa na fitovian-jo bebe kokoa.
Singa iray hafa amin'ny asan'ny Biru Terong ny fitahirizana antontan-kevitra momba ireo fahalalàn'ny teratany sy ny nentindrazana, satria ampahany betsaka no very rehefa lasa ireo zokiolona. Ny fitahirizana ho anaty antontan-kevitra io fahalalàna io dia tsy hoe fotsiny fanaovana arsiva; raha ny marina, tena ilaina be amin'ny fomba fiainantsika amin'izao fotoana io. Atrehantsika izao ny firongatry ny fahatongavantsaina manerantany hoe tena lovainjafy tokoa ho an'ny fiainan'ny tany ireo fahalalan'ny teratany, ary mahazo tombony amin'izany ny fahasalamantsika sy ny fiadanantsika, ary afaka mampianatra lesona marobe ho antsika momba ireo fomba fanao tsy mitanila ara-toekarena, sôsialy ary kolontsaina … ary tsy mikitika akory ny endrika ara-panahy aza.
EW: Karazana tantara toy inona no heverinao fa mila anaovana tatitra misimisy kokoa?
VI: Ireo tantaram-behivavy atao ankilabao mitolona ho an'ny fivelomany sy ny ankohonany no sady misedra ireo singa manapoizina ao anatin'ny kolontsaina anjakan'ny lehilahy izay mbola misy hatrany any amin'ny toerana marobe eto amin'izao tontolo izao.
EW: Inona no zavatra iray irianao hifampizaràna amin'ny Tambajotra sy ny vondrompiarahamonin'ny Video for Change?
VI: Rehefa mamokatra lahatsary iray, andramo ny mampandefitra ny fanirianao manokana mandritra ny fotoana voafetra. Fa kosa, afantohy ny saina dia mitadiava aingampanahy avy amin'izay hitanao eny an-kianja, eny amin'izay rehetra misy asa tsy mampino ataon'ny olona, tsy hitan'ny mason'izao tontolo izao. Ireny tantara ireny, izay am-behivavy ny ankamaroany, saingy indraindray koa an-dehilahy, izay mila raketina satria tsy manam-petra ny fahafahan'izy ireny manainga fanahy.
Vivian Idris avy amin'ny Hetsika Biru Terong, Indonezia. Sary nahazoana alàlana.
EW: Inona no manaraka ho ataon'ny hetsika Biru Terong?
VI: Tsy andrinay ny hahita fiarahana miasa goavana iarahana amin'ireo mpikambana hafa ao anatin'ny tambajotra Video4Change, saingy mahatsapa aho fa ilaina ny faharetana mba hitsaharan'ity valanaretina ity. Mandritra izany, tohizanay ny asa iarahana amin'ny PEKKA. Ho ahy manokana, miahy vondrompiarahamonina iray aho, tanora mpamokatra sarimihetsika ao Kendal , ao afovoan-tanànan'i Java, mba hanamafisana ny fahaizan-dry zareo mamokatra lahatsary.
EW: Raha sendra fotsiny misy olona manontany tena, ny Biru Terong ve midika hoe Baranjely Manga?
VI: Ha ha, eny, ara-bakiteny dia izay no izy. Saingy ilay anarana dia manondro loko manokana matetika fampiasa amin'ny fombandrazana fanenoman'ireo teratany izay nanaovako fanangonana tahirin-kevitra tany Sulawesi Afovoany sy Atsimo. Mavokely matsora mahafinaritra, loko manainga fanahy tafian'ireo vehivavy mahery.
*Egbert Wits dia tomponandraikitry ny fanofànana ao anatin'ny fandaharanasa EngageMedia an'ny Video for Change.